Warning: session_start(): open(/opt/alt/php73/var/lib/php/session/sess_03c761705ac6eb77a593cb4f90d3fabd, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/vsabba/public_html/somaale.com/wp-content/themes/News/functions/filters.php on line 5
Magaalada Gaalkacyo oo lagu Weeraray Madaafiic xilli ay ka duulaysay Diyaarad Rakaab Garoonka Diyaaradaha | Somaale.com
Magaalada Gaalkacyo oo lagu Weeraray Madaafiic xilli ay ka duulaysay Diyaarad Rakaab Garoonka Diyaaradaha
Kooxo hubeysan ayaa maanta lidka diyaaradaha iyo madaafiic ku weeraray garoonka diyaaradaha ee Gaalkacyo oo ku yaalla dhinaca waqooyi-bari oo ay ka taliso maamulka Puntland, inkastoo aan la sheegin khasaare ay rasaastaasi geysatay.
Maareeyaha garoonka diyaaradaha Gaalkacyo, Siciid Dhegaweyne oo saxaafadda la hadlay duqeyntan kaddib ayaa sheegay in duqeyntu ay dhacday xiilli ay si caadi ah u socdeen howlihii garoonka diyaaradaha ee Gaalkacyo.
“Madaafiicda qoriga P10-ka loo yaqaan iyo rasaasta lidka diyaaradaha ayaa maanta kusoo dhacay garoonka diyaaradaha ee Gaalkacyo, waxayna nooga imaanayeen dhinaca dhinaca Koonfurta ee Gaalkacyo,” ayuu yiri maareeyaha garoonka.
Mas’uuliyiinta maamulka Galmudug ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan madaafiicda lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee Gaalkcyo oo la sheegay in laga tuurtay Koonfurta Gaalkacyo oo u maamulkoodu ka taliyo.
Madaxtooyada Soomaaliya: Xafiiska Warfaafinta waxa uu raali gelin ka bixinayaa qalad ka dhacay mid ka mid ah howl-wadeenada.
880 askari oo tababar loogu soo xiray Muqdisho
Ra’iisul wasaare Cabdiweli oo shir ugu qeyb galay London